Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka oo sheegay in uusan jirin Baarlamaan Xukuumadda la xisaabtami karo – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in uusan jirin Baarlamaan madax-banaan oo la xisaabtami kara Xukuumadda Soomaaliya si loo saxo qaladaadka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Xildhibaanka oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku daba-feyleen Xukuumadda Reysal Wasaare Kheyrre si ay u helaan xilal iyo lacago la sheegay in laga bixiyo Madaxtooyada Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. “Ma jiro baarlamaan la xisaabtama Xukuumadda, shacabkii Golihii ay wakiisheen waa afduuban yahay waxayna ku daba-feyleen Xukuumadda”, ayuu yiri Xildhibaan Cabdirsaaq Cumar Maxamed oo katirsan Golaha Shacabka ee BFS.
Xaaladda amni ee Soomaaliya ayuu walaac ka muujiyay Xildhibaan C/risaaq oo sidoo kale katirsan Guddiga amniga ee Golaha Shacabka waxa uuna si kulul uga hadlay dilalka iyo qaraxyada ku soo laa-laabtay magaalada Muqdisho. “Hey’adii NISA ee sirdoonka qaabilsaneed waa la bur-buriyay, ma jirto saraakiil iyo qubaro amni oo dalka loo dhiibay nin jecleysi iyo saaxiibtinimo ayaa xilalka loo magacaabaa, sidaas darteed waxaa halis ku jira amniga Shacabka”, ayuu Kalfadhi u sheegay C/risaaq Cumar Maxamed.
“Al-shabaab magaalada Muqdisho waa soo galeen waxa ayna ka soo baxsanayaan duqaymaha Mareykanka ee cirka, waxa ay rabaan in ay ku dhax-dhuuntaan shacabka, xogta aan heyno waxay sheegaysaa in Shabaab badan ay Muqdisho soo galeen”, ayuu yiri C/risaaq Cumar Maxamed oo katirsan Guddiga amniga ee Golaha Shacabka.
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu xantaa in ay ku dhax-milmeen Xukuumadda Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay, markii uu is casilay Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Prof Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Xildhibaanada qaar ayaa kamid noqday Golaha Wasiirada halka qaar kalane la sheegay in ay fiilo uga talaalan-tahay Xafiisyada Madaxweynaha iyo Reysal Wasaaraha Soomaaliya waxayna taasi ay joojisay la xisaabtankii Xukuumadda ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin wixii dhacay ayey dacwad uga yihiin Reysal Wasaare Abiy Axmed